28-30ka Abriil, 2018. Marwo xaliima, guddoomiyaha GDMQ ayaa magaalada Istanbuul ee dalka turkiga uga qayb-gashay – GMDQ
kulan looga hadlaayay sida haweenka carabtu ay uga qayb-qaadan karaan geeddi-socodka doorashooyinka.kulanka ayaa waxaa soo agaasimay daladda ay ku mideysanyihiin guddiyada doorashooyinka carbeed AMBs iyo barnaamijka horumarinta aduunka ee qaramada midoobay ee UNDP. U jeeddada kulanka ayaa ahayd sare u qaadidda wacyiga haweenka carbeed iyo awood siinta haweenka si ay si lixaad leh uga qayb-qaataan hannaanka doorashooyinka dalalkooda.
Kulanka ayaa waxaa lagu matalay dhammaan wadamada carabta waxaana ka soo qayb-galay wufuud ka kala socotay guddiyada doorashooyinka ee dalalka carabta. Soomaaliya waxaa kulanka ku matalay guddoomiyaha guddiga madaxabannaan ee doorashooyinka qaranka (GMDQ) marwo Xaliima Yareey.
Guddoomiye Xaliimo waxa ay kulanka ka jeedisay khudbad dheer oo ay uga hadashay arrimo badan. Ugu horreyntii waxa ay u mahadcelisay daladda guddiyada doorashooyinka carbeed AMBs iyo UNDP oo kulanka soo qaban-qaabiyay.
Marwo Xaliimo waxa ay ka hadashay muhiimadda uu kulankani u leeyahay haweenka carbeed. Waxa ay sheegtay in uu fursad u siinayo in ay xiriiro wadashaqeyn sameystaan, wax kala bartaan khibradana wadaagaan.
Marwo Xaliimo Yareey waxay sidoo kale ka hadashay caqabadaha ay la kulanto iyada oo ah haweeney madaxna ka ah guddiga doorashooyinka Soomaaliya. Waxa ay sheegtay in ay ka hor yimaadaan caqabadaha ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed kuwaas oo salka ku haya dhaqanka bulshada. Inkasta oo ay caqabada jiraan hadana waxa ay marwo Xaliimo sheegtay in ay ka guul-gaarto shaqooyinkeeda oo dhan maadaama ay taageero xooggan ka hesho haweenka. Gabdho badan oo da’ yar Soomaaliyeed ah ayaa ii sheegaan in aan u ahay qof ay ku daydaan taasina waxay i gelisaa farxad iyo dhiirranaan badan.
Guddoomiye Xaliimo waxa ay sidoo kale faah-faahisay doorka GMDQ uu ka qaadan karo awood-siinta iyo horumarinta haweenka Soomaaliyeed. “hadafyadeenna ugu waaweyn GMDQ ahaan waxaa ka mid ah in aan xoojinno doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nidaamka doorashada haddii ay yihiin kuwa la dooranaayo ama kuwa wax dooranaaya labadaba. Haweenka Soomaaliyeed waa 50% bulshada; sidaa darteed siima socon karto in la iska indha-tiro codka haweenka” Ayay tiri guddoomiye Xaliimo.
Guddoomiyuhu waxa ay sidoo kale sheegtay in ay ka go’antahay GMDQ in ay sameeyaan waax u xilsaaran arrimaha haweenka, shaqooyinka guddiga uu qabanaayo dhammaantoodna haweenka fursad laga siiyo. Ugu danbeyntii guddoomiye Xaliimo waxa ay u mahad-celisay qaban-qaabiyayaaasha kulanka sida hagar la’aanta ah ee ay uga shaqeeyaan taageerada iyo awood-siinta haweenka. Waxa ay sidoo kale u mahadcelisay haweenka ka soo qayb-galay kulanka.
Waxaa la faafiyey April 30, 2018 August 16, 2018